Laos · Global Voices teny Malagasy
Tantara misongadina mikasika ny Laos
Rahonana ho atolotra an'i Thailandy, nangataka hialokaloka ao Kanadà ilay Laosiàna mpikatroka
Thailandy27 Marsa 2022
Fahalalahàna miteny11 Jona 2021
Avotsory Muay: Vondrona mitaky ny famotsorana ilay mpiaro ny tontolo iainana Laosiana olomangan'ny tambajotra sosialy
Fahalalahàna miteny09 Oktobra 2020
Tantara mikasika ny Laos
Kambodza 07 Janoary 2019
"Ny dikan'ny tantara; ny fitadiavan'ny vondrom-piarahamonina fomba hifankazarana na ifaharana manoloana ireo fiovana hita eo amin'ny fivarinan-dranon'ny renirano Mekong."
Fihemorana Erantany: “Ny Andalam-pandrosoana, Tsodrano Iray Vonjimaika”
Albania 16 Aogositra 2018
Indraindray izahay tsy manana hohanina afatsy ireo makaronia nampangotrahina sy lasopy amin'ny boaty eny amin'ny mpivarotra. Amin'ity indray mitoraka ity, ny zavatra ratsy indrindra izay mety ho tonga aminay dia ny tsy fahafahanay mandeha miantsena. Tsy misy tokony hampisavoritaka izany.
Horohorontany tany Laos, re hatrany Thailandy
Thailandy 14 Aogositra 2018
Namely ny avaratra andrefan'i Laos ny horohorontany nahatratra 6,1 amin'ny refy Richter. Tsy nisy niresaka momba ny horohorontany tamin'ireo bilaogera vitsivitsy tao Laos tamin'ny fotoana nanoratana. Nisy ireo bilaogera no nanoratra momba ilay horohorontany tany Thailandy izay mpifanolo-bodirindrina aminy.
Laos: Fetiben'ny Hazakazaka Sambo
Fanatanjahantena 20 Avrily 2018
Manamarika ny faran'ny fifadian-kanin'ny Bodista any Laos sy any amin'ireo firenena mifanila aminy ny fetiben'ny hazakazaka sambo. Namoaka lahatsarin'ilay Fetiben'ny Hazakazaka Sambo nifarana vao haingana tao Pakse i Darly ao amin'ny vohikala Lao Voices. Tanàna iray ao amin'ny reniranon'i Mekong ao Laos Atsimo i Pakse, ary toeram-pivarotam-paritra goavana.
Tamin'ny Tsingerintaona Faha-45 Niverenan'i Okinawa Tao Japan, Manohitra Ny Fijoroan'ny [Tafika] Amerikana Ao Aminy Ny Vahoaka
Fanoherana 17 Jolay 2017
45 taona lasa izay no namerenan'i Etazonia an'i Okinawa ho any Japan. Saingy mbola mibahan-toerana amin'ny endritany sy ny politikan'ny prefektiora ny toby Amerikana.
Manome Topi-maso Momba Ny Firotsahan'ny Miaramila Amerikana An-tsehatra Tao Azia Atsimo Atsinanana Ny Mozea Antseraseran'ny CIA
Filipina 26 Avrily 2017
Azia Atsimo Atsinanana dia faritra nisian'ny firotsahana an-tsehatry ny Amerikana tamin'ny Ady tao Vietnam, izay nitarika ny fihitaran'ny hetsiky ny milisin'ny CIA tany Laos sy Kambodza.
Ny Fomba Nitazonana Ny Hiran-drazana Hmong Ho Velona Any Andrefan'i Amerika
Amerika Avaratra 30 Mey 2016
Tany atsimon'i Shina sy Azia Atsimo-Atsinanana no niavian'ny Kwv txhiaj, ary efa an-jato taona maro niainana sy voatahiry ho velona tamin'ny alàlan'ireo mpihira azy. Iray amin'izy ireny ilay ao andrefan'i Etazonia.
Azia Atsimo Atsinanana Avy Amin'ny Mason'ny Vorona? Andramo Ato Ny Hitan'ny Mpanamory Sambondanitra
Broney 23 Marsa 2016
Ny renivohitr'ireo firenena aziatika atsimo atsinanana no anisan'ireo be sary nalaina sady malaza andehanan'ny olona indrindra eto amin'izao tontolo izao. Saingy tahaka ny ahoana moa ny endrik'izy ireo avy eny an-habakabaka?